Tawhiida Archives - Page 3 of 12 - Ibsaa Jireenyaa
January 26, 2020 Sammubani Leave a comment
Islaamni osoo of hin tuulinii fi Rabbiin waliin osoo homaa hin gabbarin (hin shaarrakin) Rabbiif harka kennu, gadi jechuu fi masakamu waan ta’eef amantii Nabiyyoota hundaati. Nabiyyoonni hundi osoo of hin tuulinii fi Rabbiin waliin waan biraa hin gabbarin (hin shaarrakin) Rabbiif harka kennanii jiru. Yommuu Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa Nabii Ibraahimiin (aleyh salaam) akka Isaaf harka kennuu fi ibaadaa Isaaf qulqulleessu ajaju Qur’aana keessatti haala kanaan arganna:
Islaama Jechuun Maal jechuudhaa?
January 25, 2020 Sammubani Leave a comment
Tawhiinni hundee amantiiti. Wanta jalqabaa namoota itti waamu qabnuudha. Yoo tawhiida kana fudhatan wanta isa booda jiru kan akka salaata, zakaa fi kan birootti ni waamna. Ergamaan Rabbii (SAW) yommuu Mu’aaziin gara Yaman ergan akkana jedhaniin:
Ulaagaalee Laa İlaah İll-Allah-Kutaa 3
January 24, 2020 Sammubani Leave a comment
Islaamni Laa ilaah illallah irratti kan ijaarrameedha. Kanaafi, Islaamni amanti tokkicha haqa ta’eedha, amantiiwwan biroo immoo baaxila. Sababni isaas, Islaamni osoo homaa itti hin qindeessin Rabbii Tokkicha gabbaruutti namoota waama. Wantoota Rabbii olta’aan alatti waaqefataman hunda garmalee balaalefata, guutumaan guututti dhoowwa. Amantiwwan biroo immoo akkanaa miti. Amantiin gariin muka, dhagaa, siidaa fi kkf waaqefachuutti nama waamu. Gariin ilma namaa, malaykoota fi uumamtoota biroo waaqefachuutti nama waamu. Dhugumatti, kuni amantiwwan kunniin baaxila akka ta’an ifaan ifatti mul’isa. Wanta nama hin fayyannee fi hin miine gabbaruun (waaqefachuun) haqa moo soba jettuun yaa jarana? Rabbii Tokkicha waan hundaa beeku, arguu, nama fayyaduu fi miidhu danda’u, rakkoo namarraa deebisuu danda’u qofa gabbaruun haqa sammuun nagaha mormuu hin dandeenyedha. Kanaafi, jechi “Laa ilaah illallah (Rabbiin malee haqaan gabbaramaan hin jiru.” jedhu haqa haqa hunda caaludha. Namni jecha tanaan adabbii Rabbii olta’aa jalaa nagaha baha. Namni jecha tana jedhu adabbii jalaa bahuu fi Jannata seenuuf ulaagaalee guutuu qabu yeroo darbe jalqabne jirra. Har’as itti fufuun kutaa dhumaa ni ilaalla.
January 22, 2020 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbe keessatti Tawhiida jechuun Gooftummaa, maqaalee fi sifaataa Rabbii fi ibaadaa keessatti Rabbiin Tokkichoomsudha jennee jirra. “Namni kaafirri gara Islaamaa seenu yoo barbaade tawhiinni wanta jalqabaa inni hojjachuu qabuudha. Tawhiinni karaa tokkicha namoonni amanti Islaamaa itti seenaniidha. Namni amantiin ykn duudhan isaa wanta fedhe haa ta’uu, Musliima ta’uuf jalqaba tawhiida qabachuu qaba. Ragaan kanaa, nabiyyoonni hundu waamichi isaanii jalqabaa gara tawhiidaati. Tawhiinni hundee amantiin irratti ijaarramuudha. Seerri amanti hundi tawhiida booda dhufa. Tawhiidaan alatti amanti irraa homtu sirrii hin ta’u. Namni tawhiida yoo hin qabaatin, salaanni, zakaan, soomni, hajjiin isaa fi kan biroo hundi sirrii hin ta’u.” Kana jechuun namni yoo Rabbiin hin tokkichoomsinii fi wanta Isaan ala jiran gabbaruu (waaqefachuu) yoo hin dhiisin, hojiin amanti inni hojjatu hundi isarraa hin fuudhamu. Ragaa kanaa (ilaali suuratu Az-Zumar 39:65) Kanaafu, namni milkaa’u fi adabbii jalaa nagaha bahuu barbaadu “Laa ilaah ill-Allah” beekuf tattaafachu qaba. Har’as itti fufuun jechi tuni nama fayyaduuf ulaagaa (sharxii) guuttamu qaban haa ilaallu.
January 21, 2020 Sammubani Leave a comment
Ji’oota darban keessatti waa’ee tawhiida ilaalun keenya ni yaadatama. Hiika tawhiida, gosootaa fi faayda isaa ilaalle turre. Jechi “Tawhiid” jedhu xumura, wahhada, yuwahhidu jedhu irraa kan fudhatameedha. Wahhada jechuun tokkichoomse, tokkicha godhe jechuudha. Akka shari’aatti tawhiida jechuun “Rabbiin mootummaa fi hojiiwwan Isaa keessatti Tokkicha shariika hin qabne, Zaata fi sifaata (amaloota) Isaa keessatti Tokkicha fakkaataa hin qabne, Isa gabbaruu keessatti Tokkicha dorgomaa hin qabne ta’uu amanuudha.”
January 20, 2020 Sammubani One comment
“Iimaanni sirrii fi tawhiinni qulqulluun waa’ee Rabbii, maqaalee fi amaloota Isaa ilaalchisee beekumsa sirrii qabaachu irratti hundaa’a. Qalbiif jireenyi, qananiin, gammachuun, nageenyi fi tasgabbiin hin jiru yoo Gooftaa, Gabbaramaa fi Uumaa ishii beektee fi wanta Isaan ala jiran caalaa jaallatama ishii yoo ta’e malee. Namni osoo Rabbitti hin amaniin, beekumsaa fi qajeelcha argachuu hin danda’u. Yoo gara Rabbii isaa hin qajeelin immoo kan dararamuu fi azzabamu (adabamu) ta’a.” Ibsi maqaalee Rabbii (Subhaanahu wa ta’aalaa) hanga danda’ameen kitaaba kana keessatti walitti qabame jira. Buusuf: https://islaama.files.wordpress.com/2020/01/ibsa-maqaalee-fi-sifaataa-rabbii-1.pdf
January 19, 2020 Sammubani Leave a comment
Bismillah jennee imala jalqabnaa
Laa ilaah ill-Allah jennee ragaa baana
Muhammadan rasulullah jennee itti guuttannaa
Hiika Laa ilaah ill-Allah beekuf Mawlaa gargaarsifannaa
Ikhlaasaa fi sadaada akka nuuf kennu Isa kadhannaa
Maqaalee Rabbii (Subhaanahu)-Kutaa 10.2
December 3, 2019 Sammubani Leave a comment
B-Bu’aa namni maqaa Rabbii olta’aa, “Al-Haadi” jedhutti amanuun argatu
Kutaalee darban keessatti maqaalee Rabbii subhaanahu wa ta’aalaa keessaa tokko Al-Haadi kan jedhu ilaalle turre. Al-Haadi jechuun Kan uumamtoota hundaa wanta isaan fayyadutti qajeelchuudha. Uumamtoota keessaa uumamtoota muraasa qajeelcha Rabbii olta’aa agarsiisan ilaalle turre. Kanneen akka kannisa, sinbira halkanii, pengu’ini fi qurxummii. Dhugumatti, umamtoonni kunniin Rabbiin olta’aan waan hundaa irratti danda’aa ta’e akkamitti akka isaan qajeelche nutti mul’isu.
December 1, 2019 Sammubani Leave a comment
Waa’ee qurxummii ilaalchisee wantoota ajaa’iba beekumsi bineensotaa fi beelladootaa nutti hima. Ajaa’ibni qurxummii keessatti argamuu kuni nama xinxallu Khaaliqa Guddaa wanta hundaa sirreesse, uumama isaa kennefi ergasii qajeelcheef akka harka kennuu fi ajajamu isa taasisa.
Kuusaa Select Month December 2020 November 2020 October 2020 September 2020 August 2020 July 2020 June 2020 May 2020 April 2020 March 2020 February 2020 January 2020 December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 March 2019 February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015
Sababootaa fi furmaata waliin oduu warra fooyya’iinsa booda duubatti deebi’anii-Dursa
Tafsiira Suuratu As-Sajdah-Xumura
Tafsiira Suuratu As-Sajdah-Kutaa 7
Tafsiira Suuratu As-Sajdah-Kutaa 6
Tafsiira Suuratu As-Sajdah-Kutaa 5
Tafsiira Suuratu As-Sajdah-Kutaa 4
Tafsiira Suuratu As-Sajdah-Kutaa 3
Tafsiira Suuratu As-Sajdah-Kutaa 2
Tafsiira Suuratu As-Sajdah-Kutaa 1